जनस्वास्थ्य सरोकार, सोल । दक्षिण कोरियामा कोभिड १९ को संक्रमणबाट एकै दिन ३५ हजार जनाभन्दा बढी संक्रमित भएको पाइएको छ । यहाँका अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार यहाँ गएको २४ घन्टाभित्र मात्र
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । उत्तर कोरियाले कोभिड १९ को संक्रमणबाट नियन्त्रणका लागि निकै कडा मापदण्डहरु लागू गरेको छ। सो मापदण्ड अनुसार यहाँ देशव्यापी रुपमा लकडाउन गरिएको छ। यहाँका नागरिकलाई घरबाट बाहिर
देशभर ३५० सक्रिय संक्रमित, थप १० जनामा संक्रमण
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण घट्दै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ४ हजार
थप २३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण, २ सय १५ जना निको
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौ । आज देशभर थप २३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । ५ हजार २ सय २२ नमुना परीक्षण गर्दा २३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
थप ३८ जनामा कोरोना संक्रमण, २६९ संक्रमणमुक्त
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ३ हजार ८५५ पीसीआर परीक्षणमा ३४ जना र
कोभिडमा आईसियूः कस्तो अवस्थामा बिरामी बचाउन सकिन्छ ?
जब कोभिड आयोे, यसबारे सबै अनभिज्ञ थिए । रोगबारे कसैलाई केही थाहा थिएन । यो रोग कसरी सर्छ ? यसले शरीरमा के कस्ता जटिल समस्या निम्त्याउँछ ? उपचार विधि के
५८ जना कोरोना संक्रमित थपिँदा १४८ जना निको
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५८ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । देशभरका प्रयोगशालाबाट ३ हजार ५३९ जनाकोे पीसीआर परीक्षण गर्दा ५० जना र १
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई कोरोना संक्रमण
जनस्वास्थ्य सरोकार । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। ट्वीट गर्दै उहाँले आफूमा संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले केही दिनदेखि आफ्नो घाँटी सुख्खा भइरहेको
नेपालमा ६० प्रतिशतले लगाए कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । नेपालमा कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मंगलबारसम्मको तथ्यांक अनुसार कुल जनसंख्यामध्ये ६० दशमलब १ प्रतिशत नागरिकले
जनस्वास्थ्य सरोकार, नयाँ दिल्ली । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट दैनिक सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या दश हजार भन्दा कम हुन थालेको छ । सरकारी अधिकारीहरुले सोमबार दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा आठ हजार १३ जना
उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै ग्राण्डी अस्पताललाई ३५ लाख क्षतिपूर्ति भराउन अदालतको आदेश
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । धापासीस्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले नवजात शिशु रिहानको उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दैं